China ZBR1001J Optical Receiver Manual Manamboatra sy Factory | Zongju
1. Famintinana ny vokatra
ZBR1001JL mpandray optique no mpandray optika 1GHz FTTB farany. Miaraka amin'ny fahazoana herinaratra optika, haavo avo lenta ary fanjifana herinaratra ambany. Izy io dia fitaovana tsara indrindra hananganana tamba-jotra NGB avo lenta.
2. Toetra mampiavaka ny fahombiazana
■ Teknika fanaraha-maso AGC optika tsara indrindra, rehefa eo ny elanelam-pahefana optique optika -9~ +2dBm, ny haavon'ny haavo, ny CTB sy ny CSO dia tsy miova amin'ny ankapobeny;
■ Ny haavon'ny fiasa Downlink miitatra amin'ny 1GHz, ny ampahany amin'ny amplifier RF dia mampiasa ny chip GaAs fanjifana herinaratra avo lenta, ny avo indrindra avo lenta hatramin'ny 112dBuv;
■ EQ sy ATT dia samy mampiasa ny fizaran-tany fanaraha-maso elektrika matihanina, mahatonga ny fanaraha-maso ho marimarina kokoa, fandidiana mety kokoa;
■ Ny valin-kafatra nasionaly sokajy II namboarina ho mpiorina, manohana ny fitantanana tambajotra lavitra (tsy voatery);
■ Ny firafitry ny compact, ny fametrahana mety azy, no fitaovana safidy voalohany amin'ny tamba-jotra FTTB CATV;
■ Azo itokisana avo lenta amin'ny alàlan'ny famatsiana herinaratra ambany, sy ny famatsiana herinaratra ivelany;
3. Parameter teknika
Mahazo hery optika
Very fahaverezan'ny optika
Halavan'ny onjam-pandraisana Optical
Karazana mpampitohy optika
SC / APC na notondroin'ny mpampiasa
Haavo Output naoty
Haavo Output Max
≥ 108 (-9 ~ + 2dBm Mandray hery optika)
≥ 104 (-9 ~ + 2dBm Mandray hery optika)
≥ 112 (-7 ~ + 2dBm Mandray hery optika)
≥ 108 (-7 ~ + 2dBm Mandray hery optika)
Famoahana famerenana amin'ny laoniny
(-9dBm / -8dBm / -7dBm / -6dBm / -5dBm / -4dBm) - (+ 2dBm) azo ovaina
Faritra fanaraha-maso elektrika EQ
Fanaraha-maso elektrika ATT
Toetra mampiavaka ankapobeny
D: DC 12V / 1A famatsian-kery ivelany
Fanamarihana 1: Tefeo 59 Famantarana fantsona analog PAL-D ao amin'ny 550MHz isan-karazany. Mandefasa famantarana nomerika amin'ny ambaratonga matetika an'ny 550MHz~862MHz. Ny haavon'ny signal digital (amin'ny bandwidth 8 MHz) dia10dB ambany noho ny haavon'ny fitaterana analog. Rehefa ny herin'ny optique optika an'ny mpandray optika dia-1dBm, ny haavon'ny vokatra: 108dBμV, EQ: 8dB.
4. Manakana Diagram
ZBR1001J miaraka amina mpandray fitantanana tambajotra kilasy II, kisary fivoahan'ny output FZ110 (tap)
ZBR1001J miaraka amina mpanafika tambajotra kilasy II, sary famantarana FP204 (mpizara roa)
ZBR1001J FZ110 (tap) kisary fivoahana output
ZBR1001J FP204 (splitter roa-lalana) kisary fivoahana
5. Lisitry ny fifandraisana amin'ny herin'ny optika miditra sy ny CNR
6. Fomba madio sy fikojakojana ny mpampitohy ny fibre optika
Imbetsaka isika no mitsara tsy mahomby ny fihenan'ny herin'ny optika na ny fihenan'ny haavon'ny vokatra azo avy amin'ny optika noho ny tsy fahombiazan'ny fitaovana, fa raha ny tena izy dia mety vokatry ny fifandraisana tsy marina an'ny mpampitohy fibre optika na ny mpampitohy fibre optique no naloto an'ny vovoka na loto.
Ampidiro izao ny fomba fahadiovana sy fikojakojana mahazatra an'ny mpampitohy ny fibre optika.
1. Tadiavo tsara ilay mpampitohy fibre optika avy amin'ny adapter. Ny mpampitohy fibre optika dia tsy tokony hikendry ny vatan'olombelona na ny maso mitanjaka hisorohana ny ratra tsy nahy.
2. Sasao tsara amin'ny taratasy fanosotra tsara kalitao na landihazo alikaola degrease. Raha mampiasa ny landihazo alikaola degrease ara-pahasalamana, dia mbola mila miandry 1 ~ 2 minitra aorian'ny fisasana, avelao ho maina ny rivotra eo ambonin'ny rivotra.
3.Ny mpampifandray mavitrika fibre optika nodiovina dia tokony hampifandraisina amin'ny metatra herinaratra optika handrefesana ny herin'ny optique output hanamafisana raha nodiovina izy io.
4.Raha manodina ny mpampitohy mavitrika fibre optika nodiovina hiverina any amin'ny adaptatera, dia tokony ho tsikaritrao mba hahatonga ny hery mety hisorohana ny fantsom-bakoly ao anaty triatra adapter.
5.Raha tsy ara-dalàna ny herin'ny optika aorian'ny fanadiovana dia tokony esorinao ny adaptatera ary hadio ny mpampitohy hafa. Raha mbola ambany ny herin'ny optika aorian'ny fanadiovana azy dia mety voaloto ilay adaptatera, diovy izy. (Fanamarihana: Tandremo tsara rehefa esory ny adaptatera mba tsy haratra ao anaty fibre.
6. Ampiasao ny rivotra voafetra voatokana na ny barika landihazo misy alikaola hanadio ny adapter. Rehefa mampiasa ny rivotra voafehy dia tokony hikendry ny fantsom-seramika an'ny adaptatera ny vavam-baravarankely, manadio ny fantsom-seramika amin'ny rivotra voahidy. Rehefa mampiasa fisotroana landihazo misy alikaola degrease, ampidiro tsara ao anaty fantsom-bakoly ny alikaola misy alikaola mba hadio. Ny torolàlana mampiditra dia tokony hifanaraka, raha tsy izany dia tsy hahatratra ny vokatra fanadiovana mety.
7. Famaritana serivisy aorian'ny varotra
1.Manome toky izahay: Fiantohana maimaim-poana mandritra ny telo ambin'ny folo volana (Avelao ny ora fiorenan'ny mari-pahaizana momba ny vokatra ho daty fanombohana). Ny fe-potoana maharitra miorina amin'ny fifanarahana famatsiana. Tompon'andraikitra amin'ny fikolokoloana mandritra ny androm-piainana izahay. Raha vokatry ny fiasan'ny mpampiasa tsy ara-dalàna na ny antony tsy azo ihodivirana no nahatonga ny lesoka tamin'ny fitaovana, dia tompon'andraikitra amin'ny fikolokoloana izahay fa hangataka ny vidin'ny fitaovana mety.
2.Raha simba ny fitaovana dia antsoy avy hatrany ny laharam-pifanampiana ara-teknika 8613675891280
3.Ny fikojakojana ireo fitaovana ho an'ny lesoka dia tsy maintsy ampiasain'ny teknisianina matihanina hialana amin'ny fahasimbana miharatsy.
Fanamarihana manokana: Raha notazonin'ireo mpampiasa ny fitaovana dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fikolokoloana maimaimpoana izahay. Hanontany ny vidin'ny fikojakojana sy ny vidin'ny fitaovana izahay.
Previous: LC mankany LC OM1 Duplex Patch Cord
Manaraka: LC mankany LC OM2 Duplex Patch Cord
Mpandray roa FTTB Optical Receiver ZBR1002D
ZBR200 roa Output FTTB AGC mpandray optika